သတင်း - ဥရောပသို့ ကွန်တိန်နာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ထိန်သိမ်း
ဥရောပသို့ ကွန်တိန်နာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
သတင်းကောင်း! ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း ဥရောပသို့ ဗီဒိုခြောက်ခု တင်ပို့ခဲ့သည်။
Suzhou Yuanda Commercial Equipment Co., Ltd. သည် စူပါမားကတ်စင်များ၊ တွန်းလှည်းများ၊ စျေးဝယ်ခြင်းတောင်းများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပွဲများ၊ ငွေရှင်းစာရင်းများ စသည်တို့ကဲ့သို့ အလွန်လွန်ကဲသော စက်ပစ္စည်းများအတွက် ရည်စူးထားသော ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံခြားဈေးကွက်များသို့ တင်ပို့နေပြီး Yuanda စင်ပေါ်မှ 80% သိမ်းပိုက်ထားသည်။ ဥရောပတောင်ပိုင်းစျေးကွက်။
တည်ငြိမ်ပြီး တည်ငြိမ်သောတိုးတက်မှုနှင့်အတူ Yuanda သည် 2010 ခုနှစ်တွင် စက်ရုံအသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်မှုစက်ကိရိယာများပေါ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ခိုင်မာအားကောင်းစေရန်၊ အရေအတွက်ထိန်းချုပ်ထားသော အပေါက်ဖောက်ခြင်း၊ အော်တိုဂဟေဆော်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်း နှင့် ငြိမ်စပရေးစပန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့် အခြားသော အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုအချို့ကို လုပ်ဆောင်ရန်၊ စက်များသည် အခြေခံအားဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်မှု တစ်ခုလုံးကို အပြီးသတ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ စင်များထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
1. မမြင်အောင်။ ကြိတ်စက်အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ စစ်ပွဲနွားစင်များတွင် အသုံးပြုသည့် စမတ်ကျသော အဆင့်မြင့်စက်များ ရှိပြီး စက်ရုံငယ်များ သို့မဟုတ် အလုပ်ရုံများတွင် အသုံးပြုသည့် ရိုးရာခေတ်ဟောင်း စက်အချို့လည်း ရှိသည်။ ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာမှာ စင်ကော်လံများ၊ စင်တန်းတန်းများ စသည်တို့ကဲ့သို့ စင်ကော်လံများ၊ စင်ထုပ်တန်းများ စသည်တို့ကို မှိုတစ်ခုမှတစ်ဆင့် မှိုတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ထုထည်တစ်ခုသို့ လှိမ့်ရန် အဓိကဖြစ်သည်။
2. Positioning and punching. အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်အရ၊ လှိမ့်ထားသော ပစ္စည်းအား လိုအပ်သော အပေါက်များဖြစ်သည့် ပြောင်းပြန်ရှစ်ပေါက် သို့မဟုတ် အကြီးစား ထိန်ကွက်များ၏ စိန်တွင်းများနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ရှိ အဝိုင်းအပေါက်များကဲ့သို့သော လိုအပ်သော အပေါက်များတွင် ထိုးဖောက်ပါသည်။ စင်ပရောဂျက်တစ်ခုလုံး၏ တသမတ်တည်းနှင့် ထိထိရောက်ရောက် ပေါင်းစပ်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် အပေါက်ဖောက်ခြင်းအား ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုများနှင့်အညီ တင်းကျပ်စွာ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
3. Bending (သံမဏိပြား)။ စင်တွင် စတီးပြားများပါလျှင် သံမဏိပြားများကို ကွေးထားရန် လိုအပ်သည်။ တစ်ခုမှာ သံမဏိပြားများကို ထုပ်တန်းများပေါ်ရှိ သံမဏိပြားများကို ထိထိရောက်ရောက် ပြုပြင်ရန်နှင့် နောက်တစ်ခုမှာ သံမဏိပြားများ၏ ဝန်ထမ်းစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
4. ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် polishing ။ စင်၏ကော်လံနှင့် ခြေဖဝါးအပိုင်းအစ၊ အလင်းတန်းနှင့် ဂရစ်ပတာကဲ့သို့သော ဂဟေဆက်ရန်အတွက် စီမံဆောင်ရွက်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို အတူတကွ ဂဟေဆော်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတော် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ဂဟေဆော်ရန် လိုအပ်ပြီး ဂဟေဆက်ခြင်းအား ခိုင်ခံ့မှုနှင့် စွမ်းရည်ပြောင်းလဲမှုတို့ကို သေချာစေရမည်။ ဂဟေဆော်ခြင်းပြီးပါက၊ စင်၏အလှကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် စင်၏ဘေးကင်းမှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက် ဂဟေအဆစ်များကို ပွတ်သင့်ပါသည်။
5. မျက်နှာပြင်ကုသမှု။ စင်၏ မျက်နှာပြင် ကုသမှုတွင် ချဉ်ခြင်း နှင့် ဖော့စဖိတ် ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ် ဖြန်းဆေး ၊ အဆက်မပြတ် အပူချိန် နှပ်ပေးခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
ပို့စ်အချိန်- ဧပြီလ 15-2021
လိပ်စာ-Zhangcun စက်မှုဥယျာဉ်၊ Wangzhuang မြို့၊ Changshu၊ Suzhou City၊ Jiangsu ပြည်နယ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ။